कस्तो डोमेन लिने ? | मेरो कलम
– ईन्टरनेटको विकास र विस्तारसगै बेवसाईटको प्रयोग र महत्व दिनानुदिन वढ्दै गईरहेको छ । शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित नरहेर ग्रामिण क्षेत्रसम्म र केन्द्रदेखी स्थानिय स्तरसम्मका विषयवस्तुलाई समेटेर बेवसाईटवाट सेवा लिने र दिने काम भईरहेको छ । महत्व र उदेश्यका आधारमा बेवसाईटमा पनी धेरै प्रकारको डोमेन नामको प्रयोग भएको पाईन्छ । शैक्षिक सस्थाको बेवसाईटमा डटइडियु (.edu), सरकारी सेवा प्रदायक सघंसस्थाको बेवसाईटमा डटजिओभी (.gov),ट्राभल एण्ड टुर सम्वन्धी काम गर्ने सस्थाको बेवसाईट डटट्राभल (.travel), टेलिभिजनको डटटिभी (.tv) जस्ता डोमेन नामको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
त्यस्तै देशको नामको आधारमा पनी डोमेन नाम छनोट गरिएको हुन्छ, जस्तो युनाईटेड किङडममा डटयुके (.uk), क्यानडामा डटसिए (।अब),फ्रान्समा डटएफआर (.fr) डोमेन नामको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने भने नेपालमा डटएनपी (.np) डोमेन नामको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । विश्वमा प्रयोगको आधारमा मुख्य त तिन प्रकारका डोमेन नाम डटकम, (.com) डटनेट, (.net) डटओजारजी (.org) अग्रस्थानमा पर्दछन् । हालसम्म ६२ करोडभन्दा वढी बेवसाईट सञ्चालन भईरहेको नेटक्राफ्ट डटकमले गरेको पछिल्लो सर्भेमा उल्लेख गरिएको छ । यी करौडो डोमेनमा डटकमको प्रयोग पचास प्रतिशत भन्दा वढी रहेको छ । डोमेन नाम के आधारमा वर्गिकरण गरिन्छ त ?
डटकम कम्पनीसगँ जोडिएको डोमेन नाम हो । व्यवसायीक उदेश्यले काम गरिरहेका कम्पनी तथा सघंसस्थाले डटकम (.com) डोमेन नामको बेवसाईट प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यो डोमेन नामको बेवसाईटमा तपाई भिजिट गर्दैहुनुहुन्छ भने सेवासगै नाफाको लागी पनी काम गरिरहेको हो भनेर वुझन आवश्यक छ । डटकम (.com) डोमेन नामको प्रयोग व्यक्तिगत बेवसाईटमा पनी गरिन्छ ।
डटनेट (.net) नेटवर्किङसगँ जोडिएको छ । ईन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडहरुले डटनेट (.net) डोमेन नामको बेवसाईट प्रयोग गर्ने गर्दछन् । नेटवर्किङ टेक्नोलोजीमा आधारित कम्पनीले डटनेटको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । जस्तो ईन्टरनेट वितरक, टेलिकम जस्ता कम्पनीले डटनेट (.net) डोमेन नामको बेवसाईट प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
डटओआरजी (.org) सघंसस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने डोमेन नाम हो जसले नाफाको लागी काम गदैन । सेवामुखी काम गरिरहेका सघंसस्थाले डोमेन नाममा डटओआरजी (.org) को प्रयोग गर्ने गर्दछन । डटओआरजी (.org) डोमेन नाम भएका बेवसाईटले सेवाको लागी मात्रै काम गरिरहेको छ भनेर वुझ्न आवश्यक छ । डटओआरजी (.org) पनी विश्वमा वढी प्रयोग हुने डोमेन नाममा पर्दछ ।
तपाईपनी आफ्नो व्यक्तिगत तथा सघंससस्था एवं कम्पनीका डोमेन रजिष्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाईनवाट सिधै लिन सक्नुहुन्छ । अनलाईनवाट रजिष्टार गर्न सकिएन अर्थात प्रक्रिया पुरा गर्न सकिएन भने विभिन्न डोमेन प्रदायक कम्पनीको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ ।
औषत वार्षिक एक हजार शुल्कको हाराहारीमा तपाईले डोमेन नाम पाउनुहुनेछ । नेपालमा डटएनपी डोमेन नामको बेवसाईटपनी वढी प्रयोग गरिन्छ । डटएनपी डोमेन वितरक कम्पनी मर्कन्टाईल कम्प्युनिकेशनका अनुसार ३५ हजारभन्दा वढी डटएनपीको डोमेन वितरण भईसकेको छ । साथै डटएनपी नामको डोमेन निशुल्क पाउनुहुनेछ । – यो लेख अन्नपुर्ण पोष्टमा पोष्टमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
युट्युवमा फल्छ पैसा
Nepali October 27, 2012
Nepali October 31, 2017